Kangton - China Luxury Solid Oak UV lacquered famitana Pivot Interior Wooden Door factory sy mpanamboatra | Kangton
Varavarana kitapo hazo
Varavarana mihidy / Veneer
Varavarana bobongolo HDF
Varavarana fitaratra fibre
Varavarana matevina / Pivot
Varavarana isaina afo
Flooring SPC hazo
Kabinetra ao an-dakozia
Luxury Solid Oak UV lacquered Famaranana Pivot Interior Wooden Door
Hahavony: 78 ″, 80 ″, 82 ″, 84 ″, 86 ″, 96 ″
Sakany: 24 ″, 26 ″, 28 ″, 30 ″, 34 ″, 36 ″
Hateviny: 35mm, 40mm, 45mm, 50mm
Ny hazo voajanahary dia hanome aingam-panahy bebe kokoa ho an'ny tranonao. Ny varavarana hazo dia karazana varavarana toy izany misy veneer hazo voajanahary sy fametahana hazo mafy mba hanomezana anao ny tena fahatsapana hazo sy ny vokany. Manolotra karazan-kazo maro karazana izahay hifanaraka amin'ny hevitra haingo anao. Ity no safidy tsara indrindra ho an'ny tetikasa avo lenta, hotely, varavarana misy afo, ivelany sy varavarana anatiny.
hahavony 1.8 ~ 3 metatra
sakany 45 ~ 120 cm
hateviny 35 ~ 60 mm
Panel Hazo hazo terebinta sy hazo vita amin'ny hazo terebinta
Kitapo hazo matevina 5-10mm Hazo matevina
Famaranana ny habakabaka UV lacquer, Sanding, Vita tsy vita
mitsingevaheva Miketrika, mikorisa, pivot
Fomba Fisaka, atsofohy amin'ny alitara
Fonosana boaty baoritra, paleta hazo
Izahay dia mamaritra ny fiheverana ny fidirana kanto. Mamorona varavarana izahay, avy amin'ireo fitaovana malaza eto an-tany, ary mahazo aingam-panahy avy amina endrika sy loko tsy mbola noeritreretinao akory. Na ivelany na anatiny, dia mamorona varavarana vita tanana niavaka izahay. Fiarovana, hatsarana mahafinaritra, endrika manokana ary mora vidy indrindra.
Inona no mahasamihafa ny varavarana fandroana hinged sy pivot?
Ny maha samy hafa an'io sy ny vavahady fametahana sisin-dalàna dia ny fiantsorohan'ny pivot dia voahidy hatrany ambony ka hatrany ambany, izay mamela ny varavarana hihodina rehefa mijanona eo amin'ny toerany. Ny varavaram-pivot dia miasa satria afaka mandray siram-baravarankely izy ireo ary misy habe hatramin'ny 36 ka hatramin'ny 48 santimetatra, ka mahatonga azy ireo ho be mpampiasa.
Ahoana no fanamboarana varavarana pivot?
Ireo Pivot Doors dia mihodina eo amin'ny savily Pivot izay manana amboaran-tsimatra mihidy eo an-tampon'ny sy eo am-baravarana. Ny savily dia ampidirina amin'ny rindrin'ny varavarana. Ny teknolojia sy ny famolavolana savily Pivot dia mamela varavarana lehibe izay tsy zakan'ny savily nentim-paharazana amin'ny ankapobeny. Ny savily Pivot dia mety amin'ny varavarana izay farafahakeliny 42 "ny sakany. Ankoatry ny maha-azo ampiharina, ny varavarana miaraka amin'ny rafitry ny savily Pivot azo sary an-tsaina dia manana endrika ankehitriny sy milamina. Manoro hevitra an'ity karazana varavarana ity izahay ho an'izay rehetra mitady hatsarana maoderina, ankehitriny ary tetezamita.
Teo aloha: Varavarana voamarina amin'ny fanoherana ny afo FD90 / FD60 / FD30
Veneer varavarana anatiny hazo
Varavarana anatiny fotsy
Voamarina Anti-afo FD90 / FD60 / FD30 Mafy Wood ...
Miloko volon-koditra tsotra sy mainty miaraka amin'ny Jamb Steel / M ...
Pivot Door KDPD04-G
haitraitra maoderina mifangaro matanjaka varavarana maoderina inte ...
Pivot Door KDPD001
Latest endrika anatiny varavarana efitrano varavarana mafy Woo ...
© Copyright - 2004-2021: Voatahiry ny zonao rehetra.